Android Myanmar Appများ စုစည်းမှု ၂ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Android Myanmar Appများ စုစည်းမှု ၂
Posted by ukkmaung on July 16, 2014 at 9:05pm
Android Myanmar App2
ကျွန်တော့် ဘော်ဘော် android သမားတွေအတွက် android ဆရာကြီးများရဲ့  မြန်မာ appတွေကို တစုတဝေးထဲ ရအောင် စုဆောင်း ရှာဖွေ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.....( မူရင်းလင့်(copy) အတိုင်းဒေါင်းသုံးပါ လင့်သေနေရင် ပြန်ပြောခဲ့ပါခင်ဗျာ)
Android Myanmar Appများ စုစည်းမှု ၁ ကို ဒီ မှာ နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှု့ဒေါင်းယူနိင်ပါတယ်>>>
အခုဖော် ပြထားတဲ့ app အများစု ဟာ JAS App များဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်က ပို့စ်တခုအဖြစ်
အချို့ကို ပြန်လည်မျှဝေ ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်....
2014 အတွက်(Newworth co.,ltd. ) မြန်မာပြက္ခဒိန် ပါ အင်္ဂလိပ်ရက် နှင့် မြန်မာရက်ကို ယှဉ်တွဲ
ပြသပေးထားသည်။ မြန်မာ လကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ ရက် ၏အရောင် ဖြင့် calendar ၏
အောက်ခြေတွင် ဖော်ပြပေးထားသည်။ကြယ်ပုံသည် အားလပ်ရက်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့်အားလပ်ရက်မျိုးဖြစ်သည်ကို သိနိုင်ရန် ထို ကြယ်ပါသော ၇က်ကို နှိပ်လိုက်ပါက အားလပ်ရက်ကိုမြင်ရပါမည်။၂၀၁၃ တွင် မပါသော နဂါးလှည့် ပြဿဒါး ရက်ရာဇာ တို့ကို အလွယ်တကူကြည့်နိုင်ရန် button လေးများထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
သုံးမယ်ဆို အောက်မှာ ရယူပါ..
ဲမြန်မာ unit converter application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ unit များ ပါဝင်ထည့်သွင်းထားပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူစေ၇န် ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အသုံးပြုလိုသူများ free download ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။၄င်း aplication သည် အလျှား/အလေးချိန်/အပူချိန်/အမြန်နှုန်း/အကျယ်အ၀န်း
ထုထည် များကို ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်ပါသည်။
Newworth co.,ltd. ရဲ့ unit convertor ကို သုံးမယ်ဆိုရင် အောက်မှာရယူပါ..
ခုန်ပျံကျော်လွှား အန္တရာယ်များ (ဂိမ်းနော်)
အနောက်ကနေ သရဲကလိုက် ကိုယ်ကပြေးရင်းနဲ့ ဒင်္ဂါးပြားတွေလိုက်စား,တောင်တွေ လိုက်ကျော် ခုန်ပျံကျော်လွှား ဆိုတဲ့ နာမည်အတိုင်း ပဲ ဆော့လို့ကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း တဲ့ မြန်မာဂိန်းလေးပါ။ အားလုံး မြန်မာစာနဲ့ ဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ခုန်ပျံကျော်လွှား အန္တရယ်မျာ; ကို ကစားမယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ရယူပါ..
"ဘောလုံးပင်နယ်တီ" အသုံးချပရိုဂရမ် ကစားရာတွင် သင်ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက် တလှဥ၁့်စီ၊ ကန်သွင်းရမယ်။ ဂိုးဖမ်းသမားအဖြစ် တစ်ဘက်စီ ဖမ်းရပါမှာဖြစ်ပါတယ်..
ကစားမယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ရယူပါ
ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား/သူများအတွက် အခြေခံထိုင်းစကားကို
အချိန်တိုအတွင်းမှာ တတ်မြောက်စေရန် ရည်ရွယ်..
ယခုအသုံးချပရိုဂရမ်တွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ဆိုင်သော နိမိတ်များ၊ မိုးလေ၀သ နှင့်ဆိုင်သော နိမိတ်များ၏ ကြိုတင်သိမြင်နိုင်သော ကံကောင်းကံဆိုး အတိတ်နိမိတ်များသာမက တွေ့မြင်နေကျ သက်ရှိသက်မဲ့ အရာဝတ္ထုတိုင်း ရဲ့ သက်ရောက်သော ကံကောင်းကံဆိုး အတိတ်နိမိတ်များ ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။သုံးမယ်ဆို အောက်မှာ ရယူပါ..
Myanmar First Aid apk
မြန်မာရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း application လေးပါ။MMSD မှဖြစ်ပါတယ်...
ကိုယ်က ဘာရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းမှ မသိဘူး မတတ်ဘူးဆိုရင်တောင် ဒါလေးကို
ကိုယ်နဲ့ အမြဲ ဆောင်ထားလိုက်ပါ။တစ်ခုခုအရေးကြုံလာရင် အရေးပေါ်သုံးလို့ ရတာပေါ့။
နည်းတွေလည်းတော်တော်စုံပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ အမြဲမကွာဆောင်ထားသင့်တဲ့ applicationပါ..
Myanmar First Aid apk သုံးမယ်ဆို အောက်မှာ ရယူပါ..
"ယောဂ ကျင့်စဉ်"မြန်မာ APK
"YAWGA ယောဂကျင့်စဉ် APK" ဤ ယောဂ ကျင့်စဉ် App ဟာဆိုရင် ဆရာကြီးဦးခင်မောင်ဆွေ ၏ ယောဂပို့ချချက်များကို ဖုန်းနှင့် အလွယ်တကူကြဥ၁့်ရှူ့ လေ့ကျင့်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှိပြီး Android Version2.2နှင့်အထက်ဖုန်းများအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ယောဂကျင့်စဉ်များကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သက်ရှည်ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင် ကြပါစေ။
"ယောဂ ကျင့်စဉ်"မြန်မာ APK ကို အောက်မှာရယူပါ......
ကွန်ပျူတာ အဘိဓာန် ကို အောက်မှာရယူပါ.....
တစ်သက်စာအဟော for android
ဆရာ သက်နှင်းဆွေ (ပုပ္ပါး) ဆယ်.နှစ်ရာသီ ဖွားတွေရဲ. တစ်သက်စာအဟော apk ဖိုင်လေးပါ ။
ရေးသားသူ- Nyein Chan Ko Ko လို့သိရပါတယ်
တစ်သက်စာအဟော for androidကိုအောက်ကလင့်မှာ ရယူပါ
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါး ဘုရားရှိခိုး အသုံးချ ပရိုဂရမ်တွင် မိမိ ပြစ်မှားမိသဥ၁် ရှိသော ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါးအား အပြစ်မှ လွတ်ကင်းအောင် ရှိခိုး ကန်တော့ တောင်းပန်နိုင်စေရန် ရယ်ရွယ်၍ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအသုံးချ ပရိုဂရမ်တွင် ဘုရားရှိခိုးပုံ၊ ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါး ကန်တော့ခန်း၊ ဆုတောင်း အပြင် ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါး ကန်တော့ရခြင်းအတွက် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပြစ်မှားမိသဥ၁် ရှိသော် ကျရောက်နိုင်မဥ၁့် အန္တရာယ်များ၏ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် များကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ခင်ပွန်းကြီး ဘုရားရှိခိုး ကိုအောက်မှာရယူပါ..
MPT Service v1.0.1 ဗားရှင်းအသစ်
MPT Service v1.0.1 လေးကတော့ အရင် v1.0.0 မှာ အဆင်မပြေတာလေးတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အပြင် GSM အချင်းချင်းငွေပို့နိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မူ့ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီApp လေးရဲ့ Featured တွေကတော့ - GSM,CDMA လက်ကျန်ငွေစစ်နိုင်ခြင်း - GSM,CDMA ငွေဖြည့်နိုင်ခြင်း - GSM Internet လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း - GSM အချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်း - GSM Internet Setting ချိန်နည်းထည့်သွင်းပေးထားခြင်း - Voice Mail အကြောင်းရှင်းပြထားခြင်းများ အပြင် မြန်မာလိုအညွန်းပိုင်းများစွာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
MPT Service v1.0.1 ဗားရှင်းအသစ် အောက်မှာဒေါင်းယူပါ
ဟင်းချက်ခြင်းသည် ဟင်းချက်ပုံစံ အသစ်များ၊ မုန့်လုပ်ပုံစံ အသစ်များ၊ အသုပ်လုပ်နဥ၁်းများကို ပေးသော အသုံးချပရိုဂရမ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စဥ၁်းများ၊ ပြင်ဆင်နဥ၁်းများ၊ ပြုလုပ်နဥ၁်းများကို ပုံများဖြင့် ဖော်ပြထားသောကြောင့် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်းချက်အသစ် 1.3ကို အောက်မှာဒေါင်းယူပါ
မြန်မာစကားပုံများကို လေ့လာ လိုက်စားချင်သူများ အသုံးပြုသင့်သော အသုံးချ ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုသာမက အင်္ဂလိပ်လိုပါ ဘာသာပြန်ပေးထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဘာသာနှစ်မျိုးဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ အက္ခရာစဉ်လိုက် ဖော်ပြထားသောကြောင့် ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပြီး လွယ်လင့်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာစကားပုံများ ၁.၀apk ကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူပါ
လူသားတိုင်းနှင့် သက်ဆ်ိုင်သော အချစ်ကို တွက်ချက်ပေးမယ့် အချစ်ဗေဒင် ဆော့လ်ဝဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုချစ်ရေးဆိုထားသော သူ၏ အမဥ၁်ကို သိရုံဖြင့် အလွယ်တစ်ကူ တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာကို ရုပ်ပုံလှလှများ၊ အသံများဖြင့် ကလေးငယ်များ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဖတ်စာ apk ကို အောက်မှာ ရယူပါ.....
သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာတွင် ပါဝင်သော သင်ခန်းစာများကို ရေးသားဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များကို စာသင်ကြားပေးရာ၌ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်တန်း မြန်မာဖတ်စာ apk ကို အောက်မှာ ရယူပါ.....
သူငယ်တန်း အင်္ဂလိပ်ဖတ်စာကို ဖုန်းတွင် အလွယ်တကူကြည့်ရှူနိုင်ရန် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများတွင် ဖုန်းပါရုံဖြင့် မိမိတို့၏ ကလေးများကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အလွယ်တကူ စာသင်ကြားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသံဖြင့်ပါ ကလေးများ သင်ကြားနိုင်သည်။
သူငယ်တန်း အင်္ဂလိပ်ဖတ်စာapk ကို အောက်မှာ ရယူပါ.....
Mobile Hotline apk အရေးကြီးသော ဖုန်းနံပါတ်များ
JAS ကထုတ်လုပ်တဲ့ Mobile Hotline apk ဖြစ်ပါတယ်.. အရေးကြီးသော ဖုန်းနံပါတ်များ၊ ဆက်သွယ်လိုသော လိပ်စာများကို ဖော်ပြပေးသော အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App တစ်ခုရှိရုံနဲ့ မိမိတို့သိလိုသော ဖုန်းနံပါတ်များ၊ လိပ်စာများကို အလွယ်တစ်ကူ ရှာဖွေနိုင်၍ မိမိတို့ ရှာဖွေထားသော ဖုန်းနံပါတ်များကို မှတ်ထားရန်မလိုပဲ တစ်ခါတည်း မိမိခေါ်ဆိုလိုသော ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ..
Mobile Hotline apkကို အောက်မှာရယူပါ..
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးအတွက် ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်၊ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ၊ ဓမ္မစကြာသုတ်ပါဠိ၊
ပဠာန်းပါတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်။
Internet Connection ပါရှိမယ်ဆိုရင် တရားကို အသံနဲ့ပါနားဆင် နိုင်မှာပါ။
ဓမ္မစက်ဝိုင်း apkကို အောက်မှာရယူပါ..
နှလုံးကျန်းမာရေး apk 1.0
လူတိုင်းအတွက် ကျန်းမာရေးဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက် နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ရေး၊ ပိုလျှံနေသောအဆီများ လျှော့ချရေးတို့ အတွက် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်နည်းများ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို သွေးခုန်နှုန်းများ ဇယားများ ၊ Calories ဇယားများဖြင့်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
နှလုံးကျန်းမာရေး မြန်မာ apk 1.0 ကိုအောက်မှာရယူပါ
သူငယ်ချင်းများ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ၊ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကို အလွယ်တကူ သိမ်းထားနိုင်တယ်။ ထို့အပြင် သိမ်းထားသော အကြောင်းအရာ များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်တယ်။
အော်တိုစာအုပ်လေး apk ကို အောက်မှာဒေါင်းယူပါ
အသုံးစရိတ်တွက်မယ်ဗားရှင်း - ၂.၃
လစဉ် ၀င်ငွေ၊ ထွက်ငွေ နှင့် လက်ကျန်ငွေများကို အလွယ်တကူ တွက်ချက်၍ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူ၍ လက်ကျန်ငွေများကို သိရှိနိုင်သောကြောင့် လူတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်မှာပါ..
အသုံးစရိတ်တွက်မယ်ဗားရှင်း - ၂.၃ ကို အောက်မှာဒေါင်းယူပါ
အိမ်ထောင်ရှင်များ အတွက် ကလေးစောင့်ရှောက်ပုံ App
မိဘများက မိမိကလေးကို ကျန်းမာသော၊ ထက်မြက်သော၊ ဥာဏ်ကောင်းသော၊ လိမ္မာသော၊ ထူးချွန်သောကလေးများ ဖြစ်ရန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှစ၍ အရွယ်ရောက်ချိန်အထိ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များကို လမ်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ကလေးစောင့်ရှောက်ပုံ App ကို အောက်မှာ ရယူပါ...
ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိသော မှဲ့များက ဘယ်လို ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေလဥ၁်းဆိုတာ ပုံများနှင့် တစ်ကွ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များပါဝင်ပါတယ်။ မှဲ့အရောင် အသွေးများ နှင့် မှဲ့ အမျိုးအစားများ အကြောင်းလဥ၁်း သိရှိရသလို မှဲ့များကပြောသော မိမိတို့ ၏ ကံကြမ္မာကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။
မှဲ့ (အမျိုးသမီး) ကိုအောက်မှာရယူပါ..
ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိသော မှဲ့များက ဘယ်လို ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာကို ပုံများနှင့် တစ်ကွ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များပါဝင်ပါတယ်။
ဤအသုံးချပရိုဂရမ်သဥ၁် အမျိုးသားများ အတွက် သီးသန့်ရည်ရွယ်ပါတယ်။
မှဲ့ (အမျိုးသား) ကိုအောက်မှာရယူပါ..
အသီးအနှံများကို လှလှပပလေး စားချင်သူများအတွက်၊ ပုံဖော် အသေးစိတ်ပြ ထားပါတယ်
အိမ်ရှင်မရဲ့အနုပညာ APP ကို အာက်မှာ ဒေါင်းယူပါ....
ဤ apkတွင် နာမည်မှည့် နည်းစနစ်များ ပါဝင်မည်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာလူမျိုးတို့ မှည့်ခေါ်ကြသော နာမည်မျိုးစုံတို့မှ သီးခြားစကားလုံး တစ်လုံးစီ၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။
အမည်များ၏ဖွင့်ဆိုချက် ကို အောက်မှာရယူပါ
တွဲမစားသင့်သော အစာများကို နဲ့ နေ့စဉ်စားသုံးနေသော အစားအစာများဟာ
ဘယ်လို စွမ်းအင်များကို ပေးပြီးမတဥ၁့်သော အစားများကို စားသုံးမိပါက ရင်ကျပ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းတို့သာ မက အသက်ကိုပါ အန္တာရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်တော်သော အစားစာများကို စားသုံး၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သော လူများဖြစ်စေရန်......
မရဏအတွဲများ App ကို အောက်မှာရယူပါ..
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ စကားကို လွယ်ကူစွာအသုံးချ ပြောဆိုနိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်..
အင်္ဂလိပ်စကားပြော App ကိုအောက်မှာ ရယူပါ
လက်ဝဲ လက်ယာ နဲ့ အသားလှုပ် နိမိတ်များကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ပျားစွဲ နိမိတ် အဟောများ ပါဝင်ပါတယ်။
အသားလှုပ်နိမိတ် App ကိုအောက်မှာရယူပါ..
စကားအလှ မြန်မာက အသုံးချ ပရိုဂရမ်တွင် မြန်မာစကားနှင့် ပတ်သတ်၍ စကားထာများ၊ စကားလိမ်များ နှင့် စကားဝှက်များကို လေ့လာနိုင်စေရန် ရဥ၁်ရွယ်ပြီး စကားထာပေါင်း ၁၇၀ ကျော်၊ စကားလိမ်ပေါင်း ၁၂၀ကျော် နှင့် စကားဝှက်ပေါင်း ၂၀ကျော်တို့ကို ရနိုင်သလောက် ထဥ၁့်သွင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
စကားအလှ မြန်မာကို အောက်မှာရယူပါ။
ပျိုမေအလှဘဂေးတွေ ရဲ့ အလှကို ပိုမိုတောက်ပပေါ်လွင်သွားအောင် ဆံပင်ဒီဇိုင်းလေတွေ
လုပ်ဖို့ ပါ။ ပျိုမေများလွယ်ကူစွာ ကေသာအလှကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်အောင်သင်ပေးထားတယ် ။
ဘိုကေမပါဟု သိရသည်။ ကတုန်းမလဲမါဘူးတဲ့..
ပျိုမေ့ကေသာကို App ကိုအောက်မှာရယူပါ..
သင်္ချာဆိုင်ရာ ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိများ နှင့်ဝေါဟာရဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုများ ပါဝင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ဥာဏ်စွမ်းကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ပဟေဠိမေးခွန်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစားနှင့်ဖြေကြည့်မယ်ဆိုရင်..
စက္ကူခေါက်ခြင်းကို အဆင့်ဆင့် ပုံလေးတွေနဲ့ဖော်ပြထားတယ် ခေါက်ရတာ လွယ်ကူစေပါတယ်
စက္ကူခေါက်ခြင်း App ကို အောက်မှာရယူပါ..
အိမ်မက်ကို လူတိုင်းမက်ကြပြီး အိမ်မက်များ၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများကို ကြိုတင်၍ သိရှိစေရန် ဤအသုံးချပရိုဂရမ် မှ ဘယ်အိမ်မက်ဟာ ဘယ်နိမိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။
အိမ်မက်ကျမ်း App ကို အောက်မှာရယူပါ..
သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး မြန်မာ appတွေနဲ့ လန်းနိင်ကြပါစေ...။
Android Myanmar Appများ စုစည်းမှု ၁ ကို ဒီ မှာ နှိပ်ပြီးလေ့လာ ကြည့်ရှု့ဒေါင်းယူနိင်ပါတယ်>>>
http://moesetmin.blogspot.tw/ မှ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းပါ။